Shiinaha Custom boorsada cudbi xayaysiis xayawaan-saaxiibtinimo eco leh logo daabacay soo saaraha iyo qeybiye | Zhihongda
Boorsada suufka dharka lagu dhejiyo ee xayawaanka ah ee xayeysiinta bey'ada u gaarka ah oo leh astaan ​​daabacan
MAKIINADDA LAGU DHAQAN KARO & SIDA LOOGU SAMEEYO SOO SAARIDDA QAADKA. Waxay ka samaysan yihiin shiraac qaro weyn oo tayo leh, kaas oo qaadi kara ilaa 50 + rodol oo raashin ah oo beddelaya 2-3 bacaha cuntada caadiga ah. Adiga oo dib u isticmaalaya bacaha raashinka dib loo isticmaali karo ee culus iyo ka ilaalinta caagagga qashinka iyo badaha!
1. Midab gaar ah, cabir, nooc, iwm, dalab dhan waa la gaari karaa
2. MAASHAALADA WASHABLE & ECO-SRIRINDLY MAALADDA DHARKA. Waxay ka samaysan yihiin shiraac qaro weyn oo tayo leh, kaas oo qaadi kara ilaa 50 + rodol oo raashin ah oo beddelaya 2-3 bacaha cuntada caadiga ah. Adiga oo dib u isticmaalaya bacaha raashinka dib loo isticmaali karo ee culus iyo ka ilaalinta caagagga qashinka iyo badaha!
3. Wanaagsan mashaariicda iyo hadiyadaha! Wanaagsan DIY! Wanaagsan mashruuca maalinta hooyada, mashaariicda DIY! Farshaxanka loogu talagalay hadiyadaha kirismaska! Bacaha shiraacyadan ayaa waxtar u leh farsameynta wixii sawirro ah ee hoos-u-dhaca ah - guud ahaan runti runtii aad bay u qurux badan yihiin oo way uga fiican yihiin DIY ama farsamaynta xagga tayada, dukaannada hiwaayadda ah ee hiwaayadda ahi weligood sidan uma fiicna! Waxqabad weyn oo xafladeed! Waxaad isticmaali kartaa rinjiga acrylic-ka caruurtana qarax ayaa qabsaday. Cabir wanaagsan oo ku fiican rinjiyeynta dharka.
4. Ma is weydiisay waxa la siinayo mashruuc farsamo? Boorsooyinkan oo leh fikrad ah in iyaga lafteeda lagu qurxiyo rinjiga farshaxanka. Tayo weyn, oo si fiican loo maydhay, waxay ku fiicnaan doontaa daabacaadda! Wanaagsan rinjiga! Kala sooc weyn oo loogu talagalay codsashada HTV ee hadiyadaha shakhsi ahaaneed! Boorsooyinkani waa cabbirka kubbadda ugu fiican. Waxay ku habboonaan karaan waxyaabo badan oo gudaha ah oo si aad u wanaagsan loo sameeyay. Waxaad u isticmaali kartaa rinjiga looxa iyo buraashka rinjiyeynta.Waa khafiif ku filan in lagu sawiro dusheeda!
5.1 Damaanad-qaadis-AAN-AAN LOOGU TALAGALAY: Waan beddelaynaa ama soo celin doonnaa boorsooyin kasta oo dilaaca ama jabiya 1 sano gudahood markii la iibsaday. Ku keydi Lacag amarro badan oo Piece ah oo wata AQAAMADAyada!
Magaca Shayga Boorsada suufka dharka lagu dhejiyo ee xayawaanka ah ee xayeysiinta bey'ada u gaarka ah oo leh astaan ​​daabacan
Hore: Bacda dabiiciga ah ee maqaarka buluugga ah ee buluugga ah ee buluugga ah oo buluug ah oo leh astaan
Xiga: Bacda weelka bacda shiraac bacda daabacaadda bac shiinaha bac
Loo Isticmaali karo 12oz Bag Shopping Bag DIY for Craf ...
Custom daabacay Eco-saaxiibtinimo Black Plain Cotton ...
Wadajirka Eco Black Friendly Friendly
Jiinyeer qalin Case qurxinta canvas Custom beddelo Sc ...
Bac jibbaar caadadii jumlada la daabacaadda f ...